Solution for fivarotana lehibe
Misy fiteny maro samy hafa ao amin'ny toeram-pivarotana lehibe entana tamin'ny fampisehoana misokatra, izay mahafinaritra ho an'ny fivarotana mpangalatra. Maro amin'ireo vokatra dia kely ary manana endrika samihafa ny fonosana. Yasen dia afaka manolotra vahaolana isan-karazany mba tsy shoplifting sy ny mpiasa halatra ho anao.
Vahaolana for Clothing Shop
EAS Tags ny Yasen ampiasaina mamorona akanjo tsara kokoa ho an'ny mpanjifa miantsena tontolo iainana, ny fiarovana ny tombontsoan'ny ny mpivarotra akanjo sy ny fanatsarana ny fahombiazan'ny asa. Fa ny isan-karazany ny lamba, EAS Tags dia ho samy hafa.
Vahaolana for elektrika Appliance Shop
Vokatra herinaratra matetika nampiseho misokatra amin'ny tontolo iainana. Ireo entana no lafo vidy sy halatra amin'izy ireo mety hiteraka fahavoazana lehibe ho fivarotana. EAS Tags sy ny vahaolana namboarina ny Yasen hiarovana ny vokatra tsy miantraika mpanjifa 'fiantsenana traikefa.
andriamby Key Detacher , Eas Glass Tag Detacher , Optical Tag Detacher , Mini Eas Detacher , Security Detacher Cap , Glass Tag Detacher ,